Izongezo zeplastiki, iPlastiki yokuKhanya okuKhanyayo, iPlastiki ye-UV Absorber-Ukuzalwa kwakhona
I-Nanjing Reborn New Materials Co., Ltd. yasekwa ngo-2018, ngumthengisi onobungcali wezongezo zepolymer eTshayina, inkampani ebanjelwe eNanjing, kwiphondo laseJiangsu.
Iimveliso zigubungela i-Optical Brightener, i-UV Absorber, isiQinisekiso sokuKhanya, iAntioxidant, iArhente yeNyukliya, iPhakathi kunye nezinye izongezo ezizodwa. Izimbozo zesicelo: iplastikhi, ukutyabeka, iipeyinti, ii-inki, irabha, i-elektroniki njl.
UKUZALWA ngokutsha bathi “Ukulawulwa kokholo olulungileyo. Umgangatho wokuqala, umthengi uphezulu ”njengomgaqo-nkqubo osisiseko, womeleza ukuzakhela. Thina R & D iimveliso ezintsha ngokusebenzisana University, ukugcina ukuphucula umgangatho imveliso kunye nenkonzo. Ngophuculo nohlengahlengiso kwishishini lemveliso yasekhaya, inkampani yethu ikwabonelela ngeenkonzo zonxibelelwano ezibanzi kuphuhliso lwamazwe aphesheya kunye nokudibana kunye nokufunyanwa kwamashishini akumgangatho ophezulu asekhaya. Kwangelo xesha, singenisa izongezo zeekhemikhali kunye nezinto ezingafunekiyo phesheya zihlangabezana neemfuno zentengiso yasekhaya.
Isishwankathelo soShishino lokuGuqulwa kwePlastiki
Isishwankathelo soShishino lokuGuqulwa kwePlastiki intsingiselo kunye neempawu zeplastikhi zePlastiki zobunjineli kunye neeplastikhi ngokubanzi ...
Ithemba lesicelo se-o-phenylphenol
Ithemba lesicelo se-o-phenylphenol O-phenylphenol (OPP) luhlobo olutsha olubalulekileyo lweemveliso zeekhemikhali ezintle kunye ne-organic intermediates. Isetyenziswa ngokubanzi kumacandelo okuzala, anti-umhlwa, ukushicilela kunye nokudaya auxil ...
I-Antiseptic kunye nefungicide yokuthambisa
I-Antiseptic kunye ne-fungicide yokwalekaIingubo zibandakanya i-pigment, i-filler, i-color paste, i-emulsion kunye ne-resin, i-thickener, i-dispersant, i-defoamer, i-arhente yokulinganisa, umncedisi wefilimu, njl.